को हो यसरी स्वयम्भू क्षेत्रलाई कुरुप बनाउने? – MySansar
को हो यसरी स्वयम्भू क्षेत्रलाई कुरुप बनाउने?
Posted on September 29, 2019 by Salokya
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको स्वयम्भू क्षेत्रमा कसले हो यसरी ठाउँठाउँमा पहेँलो पोतेर बिजोग बनाएको रहेछ। हैन सम्पदा क्षेत्रमा यसरी जोकसैले इनामेलको रङ्ग पोत्न पाउँछ र भन्या। हेर्नुस् त कति कुरुप बनेको छ मूर्तिहरु यसरी पहेँलो इनामेलले पोतिँदा !
यत्तिकै राम्रो देखिन्छ त यो। किन त्यसरी टुप्पो र नागमा पहेँलो पोत्नुपर्ने हो?
यसमा हेर्नुस् त, चाहिने काम हो यो पहेँलो र सेतो रङको? यसले राम्रो बनाएको छ कि झन् कुरुप बनाएको छ?
टाउकोमा पहेँलो पोत्दैमा राम्रो हुन्छ भन्ठान्ने सोच कसरी आयो होला यो गर्नेको?
4 thoughts on “को हो यसरी स्वयम्भू क्षेत्रलाई कुरुप बनाउने?”
लौ यी मदन ले पनि कैले कहिँ त ठिकै बोल्छन यार !
नेपाल देश हाम्रो आफ्नो ब्यक्तिगत सम्पदा, सम्पत्ति, सबथोक हो तैपनि यसको शासन सत्ता हाम्रो हातमा छैन भने झन स्वयम्भु क्षेत्र त विश्व सम्पदा भनेर ट्याग लगाईदिएको छ । अब विश्व सम्पदा भएपछि विश्वभरीका शरणार्थीहरु विभिन्न भेषमा बसेका छन् । यो त विश्वको सम्पदा हो भने आफुखुसी रंग दलिदिए होलान् नि । रेखदेख गर्ने निकायहरु जाँड रक्सी खाएर झुले होलान अनि जस्लाई जे मन लाग्छ त्यही गर्छन् । कहिले आफुखुसी कंक्रिट गेट बनाउने कहिले ईनामेल पोत्ने । कुन दिन स्वयम्भु गुम्बामा पर्यटकको लागि भनेर जाँडको भट्टी खोल्न बेर छैन ।
बादर को हात मा नरिवल परेपछि के गरोस त् ?
यो प्रश्न स्वयम्भु आउने सिट चन्दा उठाउने समुह र यसरि रंग पोत्त्दै गर्दा त्यहाको चुप बसेको प्रहरी सिट गर्नु पर्छ/ ती दुई समुह को …बिना स्वयम्भुमा …पनि गर्न सकिंदैन/
LeaveaReply to punya Cancel reply